Qiimaha lagu seexdo Hoteelada Caabud waaq oo sare u kac uu ku yimid. | KEYDMEDIA ONLINE
Qiimaha lagu seexdo Hoteelada Caabud waaq oo sare u kac uu ku yimid.
Caabuud Waaq (Keydmedia) - Wararka laga helayo degmada Caabuud Waaq ee gobalka Galguduud, ayaa waxa ay xaqiijinayaan in ergo Ahlusunna ka socota oo kabadan 200 ay gaareen halkaasi si ay uga qeyb galaan kulan weynaha Ahlusunna oo lagu balansanyahay in uu ka dhoco degmada 15-ka Bishaan.
Qulqulka ergadaasi waxa uu qiima koror ku riday Hoteelada yar yarka ah ee ku yaalla Degmada oo ah meel aan looga baran in dad sidaa u badan ay hoteeladeeda gaaraan, waxaana rintasi soo dhaweeyay milkiilayaasha Hoteelada.
Kulan Weynaha Ahlusunna oo horay dhowr jeer u baaqday ayaa waxaa hada leesku wafaqay in uu si rasmi ah u dhoco bartamaha bishaan, waxaana gudaha dalka iyo dibadiisaba ka imaanaya ergadii ka qeyb gali laheed.
Kulankaasi ayaa lafilayaa in ay kasoo baxaan waxyaaba badan oo wax kabedli kara hanaanka siyaasadeed ee ururka Ahlusunna Waljamaaca.